Ka Faa'iidaysanaysid Suuqa Adduunka | Martech Zone
Dhawaan, waxaan booqday tafaariiqle maxalli ah. Wuxuu helay ganacsi aan caadi aheyn iyo goob uu ku naqshadeyn karo, ku dayactiri karo isla markaana ku iibin karo badeecadaha dhammaantood meesha uu ka soo jeedo. Xarumahiisa waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican dalka, qof kasta oo ka mid ah shaqaalihiisana waa mid si gaar ah u karti badan, aqoon iyo shahaado haysta.
Caqabadiisa ayaa ah in suuqgeyntiisa soo jireenka ah aysan soo jiidaneyn taraafikada cagta ee ay ahaan jirtay. Joogitaankiisa internetka badanaa waa buug-yare. Waxaan ka caawin doonnaa la shaqeynta shakhsi ahaaneed boggiisa, waxaan ka caawin doonnaa inuu farsameeyo oo uu la wadaago sheekooyinka macmiilka ee cajiibka ah ee uu maalin walba arko, ka caawiyo inuu dhiirrigeliyo hibada iyo waayo-aragnimada uu soo bartay, iyo inaan ka caawino inuu ballaariyo gaaritaankiisa wixii ka baxsan dhawr mayl agagaarkiisa.
Mid ka mid ah waxyaabihii aan ka wada hadalnay wuxuu ahaa ganacsiga. Wuxuu i eegay sidii uusan i rumaysanayn - ma uusan rumaysnayn wax soo saarkiisa gaarka ah, kan ugu sarreeya, alaabooyinka gacanta lagu sameeyo inay kula tartami karaan khadka tooska ah shabakado badan oo e-commerce ah. Kuma tartami karo mugga iyo miisaaniyadda suuqgeynta ee shirkadahaan waaweyn.
Hase yeeshe, maahan Wuxuu u sameeyaa tan tan bulshada deegaanka uusan wadaagin. Wuxuu leeyahay badeecooyin bulsho mas'uul ka ah oo macaamiisha ay raadin doonaan. Iyo, ugu fiican oo dhan, waa suuq weyn oo caalami ah oo halkaas ku yaal. Waxyaabaha fudud sida xoogga doolarkeennu oo hoos ugu dhacaya waddan tartamaya ayaa cirka ku sii shareeraya iibkiisa dibadda. Weligiis kuma uusan jirin ganacsigaas.
Haddii aad tafaariiqle tahay maxalliga oo aad lumineyso iibinta khadka tooska ah… u gal internetka iibka gobolka oo dhan! Haddii aad tahay gobolka oo dhan, u noqo qaran. Haddii aad qaran tahay, u gudub caalami! Waad iskaga dhejin kartaa dukaankaaga guud ahaan webka, oo ay kujirto inaad alaabta saarto eBay iyo Amazon. Nidaamyada 'ecommerce' maanta waxay horeyba u xisaabiyeen noocyada adag ee canshuuraha iibka iyo shuruudaha rarka adigoon u baahnayn inaad khabiir ku noqotid. Waad sii wadi kartaa inaad ku kordhiso taraafikada cagahaaga bartaada OO aad u furto suuqaaga adduunka!
Ku dhowaad 42% dadka adduunka ayaa heli kara internetka (Janaayo 2015), iyada oo ku saleysan isbeddelladan, waxaa la filayaa in moobilku uu riixayo gelitaanka internetka in ka badan 50% dhammaadka 2016. Fursadaha Caalamiga ah ee Tafaariiqda Online 2015.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ka soo baxa faahfaahinta:
Ingiriiska ayaa leh kharashka ugu badan ee isticmaalaha internetka, celcelis ahaan $ 1364 sanadkii 2014
In kasta oo uu haysto qaddarka saddexaad ee ugu badan isticmaalka internetka, in ka yar 1% iibka tafaariiqda ee Hindiya ayaa lagu sameeyaa khadka tooska ah
Japan ayaa dhowaan soo baxday ka ciyaartoy weyn ka noqda suuqa e-commerce iyadoo la saadaaliyay in $ 83 bilyan lagu bixin doono 2015
Tags: suuqyada ecommercekharashka isticmaalaha internetkaganacsiga caalamiga ahsuuqa adduunkaiibka internetka ee Hindiyaiibka tafaariiqda indiaganacsiga caalamiga ahisticmaalka internetkaJapanganacsiga japanbaar shaybaarkauk ganacsiga
3 Sababood Tarjumaadda Mashiinka uma Dhow Tarjumaadda Aadanaha